HERE Map Creator Discussion board - Mi နှင့် Nokia တို့ Partnership စာချုပ် ချုပ်ဆို
Forums › South East Asia › Myanmar (Burma) › Mi နှင့် Nokia တို့ Partnership စာချုပ် ချုပ်ဆို
Mi နှင့် Nokia တို့ Partnership စာချုပ် ချုပ်ဆို
This topic contains0replies, has 1 voice, and was last updated by LwanThin Thin Thant4years, 10 months ago
LwanThin Thin Thant • July 8, 2017 at 4:03 pm UTC
ကဲ… Mi ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြီ! ဒီနေ့က Mi အတွက်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Mi နဲ့ ကမ္ဘာကျော် technology brand ဖြစ်တဲ့ Nokia ရဲ့ partnership စာချုပ်ကို ဒီနေ့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လေ။ Mi နဲ့ Nokia ပူးပေါင်းပြီး Mi fans တွေအတွက် ဘယ်လို product အသစ်တွေ ယူလာပေးမလဲ ဆိုတာတော့ ရင်ခုန်စရာပဲနော်!
Mi နှငျ့ Nokia တို့ Partnership စာခြုပျ ခြုပျဆို
ကဲ… Mi ကတော့ လုပျခလြိုကျပွီ! ဒီနကေ့ Mi အတှကျအရမျးစိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့ နတေ့ဈနပေ့ါ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ Mi နဲ့ ကမ်ဘာကြျော technology brand ဖွဈတဲ့ Nokia ရဲ့ partnership စာခြုပျကို ဒီနမှေ့ာ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့တယျလေ။ Mi နဲ့ Nokia ပေါငျးပွီး Mi fans တှအေတှကျ ဘယျလို product အသဈတှေ ယူလာပေးမလဲ ဆိုတာတော့ ရငျခုနျစရာပဲနျော!
Credit: Mi Myanmar